पार्टीमा सल्केको आगो अखिलमा पुग्यो अब के होला? | रेडियो झापा 100.7 MHz.
पार्टीमा सल्केको आगो अखिलमा पुग्यो अब के होला?
रेडियो झापा 100.7 MHz. आइतबार, भाद्र १४, २०७७ १२:४१:४२
१४भदौ,काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को रोग जस्ताको तस्तै पार्टीमा सरेको छ । पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएसँगै पार्टीभित्रको विवाद मिलन विन्दुतर्फ अघि बढेका बेला पार्टीको महत्त्वपूर्ण भ्रातृ सङ्‍गठन अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियू) मा भने भाँडभैलो निम्तिएको छ ।
सहसंयोजक रञ्जित तामाङले गत शुक्रबार (भदौ १२) गते शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई एकल हस्ताक्षरमा २१ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।
संयोजक र पार्टी कमिटीसँग छलफल-निर्णय नगरी एकलौटी ढङ्‍गले ज्ञापनपत्र बुझाएको भन्दै अहिले नेकपा अखिलभित्र रडाको चुलिएको छ । नेता-कार्यकर्ता सामाजिक सञ्जालमा आरोप-प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् ।
संयोजक ऐन महरले ज्ञापनपत्र बुझाउनेबारे संगठनका कुनै छलफल नभएको बताए । अनेरास्ववियुले संस्थागत हिसाबले ज्ञापनपत्र नबुझाएको बताउँदै ‘खै कसले कहाँ के बुझायो आफ्नो जानकारी नभएको’ प्रतिक्रिया दिए ।
“ज्ञापनपत्र हो कि, विज्ञप्ति बुझाएको हो मलाई केही थाहा छैन । अनेरास्ववियूले बुझाएको हो भने मलाई थाहा हुनुपर्ने हो । तर, मेरो जानकारीमा पनि छैन,” उनले टिप्पणी गरे, “अनेरास्ववियूले बुझाएको भए विधि–पद्धतिअनुसार नै बुझाउँथ्यो । यसबारे सबैसँग छलफल हुन्थ्यो ।”
‘पार्टीको रोग अखिलमा सल्कियो’
सह-संयोजक रञ्जित तामाङ पार्टीभित्रको विवाद सङ्गठनमा कपी-पेस्ट गर्न खोजेको बताउँछन् । “पार्टीको विवाद तलतल नआउनुपर्ने हो । विद्यार्थी सङ्गठन पार्टीको पिछलग्गु, पुच्छर होइन । वाचडग हो । खबरदारी गर्ने, प्रश्न उठाउने र दबाब दिने निकाय हो यो । पछिल्लो समय अनेरास्ववियूभित्र मण्डलेकरण हाबी भयो,” उनी टिप्पणी गर्छन् ।
सरकारको कामलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा समस्या भएको र त्यही विस्तारित भएर ज्ञापनपत्रसम्म पुगेको उनको बुझाइ छ ।“सरकारको नाङ्‍गो गुणगान गाउने कि, गुण र दोषका आधारमा हेर्ने भन्ने कुरामा हाम्रो दृष्टिकोण मिलेन,” उनी प्रस्टीकरण दिन्छन् ।
पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुग्दा संयोजक ऐन महरकै नेतृत्वमा असार २३ गते होटल हार्दिकमा गुटगत भेला भएको र त्यसैले विवादको मलजल गरेको उनको ठहर छ ।
“गुटगत भेला भएको मलाई पनि जानकारी थिएन । उनी भन्छन्, “माधवकुमार नेपालसँग सम्बन्धित भएका पदाधिकारीलाई पनि थाहा थिएन । तलतल कार्यकर्तालाई भेला छ भन्ने सन्देश आएपछि मैले खबर गर्ने साथीसँग बुझेँ । त्यतिबेला माथिकै निर्देशन होला । पार्टी फुटतिरै जाला भन्ने पनि भयो ।”
संगठनकै नेतृत्वमा अलग भेला भइसकेपछि विधि र पद्धतिको कुरा उठाउनु बेकारको कुरा भएको उनको तर्क छ । “संगठनका संयोजक नै अलग भेला गर्नुहुन्छ भनेछि एकता, सहमति, सहकार्य, पद्धतिको विधिवत अन्त्य भइहाल्यो नि,” तामाङ भन्छन्, “त्यसपछि हामीले पनि छलफल गर्‍यौं । संयोजकले नै सङ्गठनलाई एकढिक्का बनाएर सबैलाई समेटेर लैजानुको सट्टा उहाँ नै गुटगत भेलाको पहल लिने भए पनि संगठनमा एकमत रहँदैन । एकढिक्का पनि हुँदैन । त्यसपछि कतिपय ज्वलन्त मुद्दा र विषयमा आ-आफ्नो ढङ्‍गले बोल्ने गरेका छौं ।”
अहिले सङ्गठनको विषयमा संयोजक र सहसंयोजकमात्रै होइन, महरले आफ्ना गुटबाहेक कोही कसैसँग पनि छलफल, परामर्श नगरेको तामाङको आरोप छ । विद्यार्थीहरूको मुद्दा, जनजीविकाको सवालमा छलफल पनि आ-आफ्नै समूहमा हुने गरेको ज्ञापनपत्र त्यसैको रूप भएको उनी बताउँछन् ।
“कोभिड-१९ को यत्रो महामारी छ । यी विषय सङ्गठनमा सामूहिक छलफल हुनुपर्ने हो । संयोजकलाई यसमा कुनै दिलचस्पी छैन । शैक्षिक सत्र मध्यान्तरतिर आइसक्यो । कहिले कोरोना नियन्त्रण होला र विद्यार्थीको पढाइ सुचारु होला भनेर हेरेर बस्नुपर्ने अवस्था छ । ८१ लाख विद्यार्थीको सवाल छ । बालबच्चाहरू घरमा छन् । वैकल्पिक सिकाइ, अनलाइन सिकाइले सबै बालबालिका-विद्यार्थीलाई जोड्न सकेको छैन । विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूको बेग्लै समस्या छ । यी समस्यामा संयोजक ऐन महर कतै पनि हुनुहुन्न,” तामाङ बताउँछन् ।
कोरोनो शिक्षा क्षेत्र तहसनहस पारेका बेला विद्यार्थी सङ्गठनको नेता बोल्नुपर्ने दायित्व आफूले बहन गरेको तामाङको तर्क छ ।
“मैले संयोजकलाई नपर्खिएको पनि होइन । छलफल गर्ने प्रयत्न पनि नगरेको होइन । उहाँले चासो नै नदिएपछि शिक्षा क्षेत्रमा यसो गरेर जानुपर्छ भनेर हामी केही साथी सल्लाह गर्‍यौं र ज्ञापनपत्र बुझायौं । अहिले नाङ्गो टिप्पणी भइरहेको छ,” उनी भन्छन् ।
साबिक अनेरास्ववियुकी सचिव र एकीकृत कमिटीकी सदस्य आरती लामा यस्तो बेलामा सङ्गठन गतिशील हुन नसक्नु र शिक्षा क्षेत्रका यावत मुद्दा उठान नसक्नु दुःखद् भएको टिप्पणी गछिन् । संगठन विधि, पद्धतिमा चलाउने आफूहरूको प्रयास निरर्थक रहेका र अहिले पनि त्यसैमा प्रयत्न जारी रहेको उनको भनाइ छ ।